Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Safarka » Shabakadda Dalxiiska Adduunka Bangladesh Hoggaanka Cutubka & Diiradda
Bangladesh Wararka Wararka • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Dadka • Ogeysiisyada Saxaafadda • War-Saxaafadeed • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Kooxaha Xiisaha Shabakadda Dalxiiska Adduunka iyo Cutubyada waxaa lagu soo bandhigay Malaysia, Balkans, Saudi Arabia, Africa, iyo gobollo kale oo badan. Kooxaha xiisaha leh waxaa lagu ammaanaa kooxaha hoggaaminta ee wax ka qabanaya duulista ilaa martigelinta, nabadda ilaa dalxiiska. Cutubka dhowaan la aasaasay ee Bangladesh wuxuu khibrad iyo hoggaan u keenaa isku darka ururkan cusub.
The Shabakada Dalxiiska Adduunka waxay ku dhawaaqday sameynta kooxdeeda xiisaha Bangladesh/Cutubka oo uu hoggaamiyo HM Hakim Ali.
Iyada oo leh kooxo danaynaya, Shabakadda Dalxiiska Adduunka (WTN) waxay xubnaheeda siisaa cod maxalli ah oo xoog leh, isla mar ahaantaana ay ku jirto codkan maxalliga ah madal caalami ah.
WTN waxay bilowday dib u dhiska.rajo Wadahadalka Maarso 2020 wuxuuna u sii kordhayay sidii iskaashi-dadweyne oo gaar loo leeyahay oo matalaya meherado badan oo dhexdhexaad ah ilaa kuwa yaryar ee ku yaal 127 dal.
Bangladesh, oo ku taal Bariga Hindiya ee ku taal Bay ee Bengal, waa waddan ku yaal Koonfurta Aasiya oo lagu calaamadeeyay cagaar cagaaran iyo biyo -mareenno badan. Wabiyadeeda Padma (Ganges), Meghna, iyo Jamuna waxay abuuraan bananyo bacrin ah, oo ku socdaalka doontu waa wax caadi ah. Xeebta koonfureed, Sundarbans, oo ah kayn mangrove aad u weyn oo lala wadaago Bariga Hindiya, waxay hoy u tahay shabeelka Royal Bengal.
Ilaa uu ka dillaacay COVID-19 bishii Maarso 2020, dalxiisku wuxuu ahaa mid firfircoon oo ka mid ah qaybaha ugu faa'iidada badan dhaqaalaha adduunka iyo sidoo kale dalal badan oo soo koraya sida Bangladesh.
Bangladesh waxay leedahay meelo badan oo dabiici ah, dhaqameed, taariikhi ah, qadiimiga ah, diineed, iyo meelaha dadku u dalxiis tago. Booqashada waddankan, qofku wuxuu fursad u helayaa inuu barto dadka qabyaaladda iyo dhaqankooda gaarka ah, caadooyinkooda, cuntooyinkooda, iyo duur -joogta noocyadeeda kala duwan. Dalxiisayaashu waxay kaloo ku raaxaysan karaan waxqabadyo kala duwan oo la xiriira dalxiiska sida barafka biyaha, socodka webiga, socodka, doonida, doon-doonista, qubeyska badda, iwm.
Warshadaha dalxiiska waxaa loo arkaa warshado soo koraya dalal badan oo soo koraya. Waxay kaalin muhiim ah si toos ah iyo si dadbanba ugu leedahay heerka kobaca GDP ee Bangladesh iyada oo abuurtay fursado shaqo oo cusub oo lab iyo dheddig labadaba, yareynta saboolnimada, kor u qaadista ka -qaybgalka bulshada maxalliga ah, kasbashada lacagta shisheeye iyada oo loo marayo dalxiisayaasha shisheeye, hagaajinta heerarka dhaqaale ee dadka maxalliga ah, iyo samaynta dadka dhaqaale ahaan iyo bulsho ahaanba deggan.
Shabakadda Dalxiiska Adduunka waa codkii raagay ee ganacsiga yar-yar iyo kuwa dhexdhexaadka ah iyo meheradaha dalxiiska ee adduunka. Iyadoo la mideynayo dadaallada, WTN waxay hormarisaa baahiyaha iyo rabitaanka ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah iyo daneeyayaashooda.
Dad badan oo Bangladesh ah ayaa sheegaya in Mr. HM Hakim Ali uu ahaa aasaasihii warshadaha dalxiiska ee Bangladesh. Wuxuu soo noqday Madaxweynaha Ururka Hoteellada Caalamiga ah ee Bangladesh.
War -saxaafadeed maanta, Shabakadda Dalxiiska Adduunka ayaa ku faanay inay ku dhawaaqday magacaabista Mudane HM Hakim Ali oo hogaaminaya WTN -ka cusub Kooxda Xiisaha Bangaladesh.
Juergen Steinmetz, Guddoomiyaha, WTN
Guddoomiyaha WTN Juergen Steinmetz ayaa yiri: “Markii aan u safray Bangladesh, waxaan arkay kartida warshadaha safarka iyo dalxiiska waxaanan fahmay saameynta dhaqaale ee dalkaas. Waxaan rajeyneynaa in kooxdayada cusub ee xiisaha leh, iyo Mr. Ali oo ah hoggaamiye, ay wax weyn ka beddeli doonaan maaraynta warshadaha dalxiiska ee Bangladesh iyada oo loo marayo duufaanta COVID-19.
Ganacsiyada dhexdhexaadka ah iyo kuwa yar-yar ayaa kaalin hoggaamineed oo lama huraan ah ka qaata Bangladesh, WTN-na waxay diyaar u tahay inay u sii jirto danta kooxdan garabka garabka ah Mr.
HM Hakim Ali, Gudoomiyaha, WTN Qeybta Bangladesh
WTN Guddoomiyaha Qaybta Bangladesh HM Hakim Ali, oo isna ah mulkiilaha Hotel Agrabad Ltd..,, ayaa ku dhawaaqay guddigiisa oo ka kooban 13 xubnood.
Iyada oo la isugu keenayo xubnaha gaarka loo leeyahay iyo kuwa dawliga ah aaladaha heer gobol iyo heer caalami, WTN ma aha oo kaliya u dooda xubnaheeda laakiin waxay siisaa cod shirarka dalxiiska ee waaweyn.
WTN waxay siisaa cod siyaasadeed iyo mid ganacsi oo qiimo leh ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah waxayna bixisaa tababar, la-talin, iyo fursado waxbarasho.
"Dib u Dhiska Safarka”Hindisaha waa wada hadal, isweydaarsiga fikradaha, iyo bandhigga hababka ugu wanaagsan ee xubnaheennu ku leeyihiin in ka badan 120 dal.
The “Geesi” Abaalmarinta waxay aqoonsan tahay kuwa taga masaafada dheer ee u adeega bulshada safarka iyo dalxiiska laakiin badanaa waa la iska indhatiraa.
The "Khatimidii Dalxiiska ee Nabdoon”Wuxuu siinayaa daneeyayaashayada iyo meelaha loo socdo madal ay ku muujinayaan rabitaankooda ah in dib loo furo dalxiiska si nabad ah oo xilkasnimo ku jirto.
Si loo gaaro hadafyadan, WTN waxay dhiirigelineysaa sameynta kooxo danaynaya, oo ay ku jiraan cutubyada maxalliga ah, kuwaas oo awood u yeelan doona inay wax ka qabtaan arrimaha gaarka ah ee maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah ee ka jira goobaha maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah.
Qaybta Bangladesh ee WTN
HM Hakim Ali - Madaxweyne
MN Karim - Madaxweyne ku xigeenka
Mehedi Amin - Madaxweyne ku xigeen
Syed Ghulam Qadir - Xoghayaha Guud
Taslim Amin Shovon - Jt. Xoghayaha Guud
Syed Ghulam Mohammed - Agaasime
Syed Mahbubul Islam - Agaasime
Maxamed Irad Cali- Agaasime
Nazrul Islam - Agaasime
Axmed Hossain - Agaasime
Ariful Haque - Agaasime
Sohail Majid - Agaasime
Xarunta WTN waxay ku taal Honolulu, USA. https://wtn.travel/ https://wtn.travel